ကြုံတွေ့နေရ လုပ်ငန်းခွင်ဘ၀ (ခရီးသွားလုပ်ငန်း) – ၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြုံတွေ့နေရ လုပ်ငန်းခွင်ဘ၀ (ခရီးသွားလုပ်ငန်း) – ၃
ကြုံတွေ့နေရ လုပ်ငန်းခွင်ဘ၀ (ခရီးသွားလုပ်ငန်း) – ၃
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Jan 28, 2013 in Creative Writing, How To.., My Dear Diary, Think Different | 31 comments
လေယာဉ် changes၊ cancel တွေထဲမှာ သံတွဲလေယာဉ်က တစ်ခြား sector တွေထက် ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ငပလီဆိုတာ ခရီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှ အပန်းဖြေသွားတဲ့ နေရာပါ။ ငပလီကပြန်လာရင် တန်းပြီး departure ထွက်ရင်ထွက်၊ နေရင်လည်း ရန်ကုန်မှာ တစ်ညလောက်ပဲ ထပ်နေ၊ နောက်နေ့ဆို departure၊ အဲဒီလိုမျိုးတွေပါ။ ဆိုတော့ မနက်လေယာဉ်နဲ့ပြန်လာပြီး ညနေ departure ထွက်မယ့် ဧည့်သည်ဆိုရင် လေယာဉ်နောက်ကျလို့ မရသလို၊ နောက်တစ်နေ့မနက်ပြန်မယ့် ဧည့်သည်အတွက်ဆိုရင်လည်း လေယာဉ် cancel ဖြစ်လို့ မရပါဘူး။ departure လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဧည့်သည်မှာ အချိန်မရှိလို့ ညနေဘက် တန်းပြီး departure လုပ်ပေးထားရပြီဆိုရင် ဘုရားတနေရပါတယ်။
တစ်ခါသား ကျွန်မတို့တစ်ရုံးလုံး ဘန်ကောက်ကို ခရီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ MD ဆီကို ဖုန်းဝင်လာပါတယ်။ ကျွန်မရောင်းထားတဲ့ဧည့်သည်ရဲ့ သံတွဲ – ရန်ကုန် လေယာဉ် (Air Mandalay) cancel ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့။ ရုတ်တရက်တော့ တော်တော်လေး ခေါင်းကြီးသွားပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက တစ်ရုံးလုံးက ခရီးထွက်နေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် တော်သွားတာက ဧည့်သည်က ရန်ကုန်မှာ နောက်တစ်ရက်ကို free day ထပ်နေထားပါတယ်။ Air Mandalay က ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ cancel ဖြစ်တဲ့ တစ်ညအတွက် 2* ဟိုတယ်မှာ နေရင်နေ၊ မနေရင် (၃၅) ဒေါ်လာ ပေးပါမယ်တဲ့။ လေယာဉ် cancel လုပ်တာလည်း လွယ်ပါတယ်။ (၃၅) ဒေါ်လာ ပေးရတာလည်း လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဧည့်သည်က နောက်တစ်ရက်မနက်မှာသာ departure ထွက်ရမယ်ဆိုရင် လွတ်သွားတဲ့ departure အတွက် ဘယ်လိုတာဝန်ယူပေးမှာပါလဲ။ (ရန်ကုန် – ဘန်ကောက် (Thai Airways – TG 304) လေယာဉ်က မနက် ၉း၄၀ ထွက်တာပါ။ သံတွဲ မနက်လေယာဉ်တွေက အစောဆုံးရောက်ရင် (၁၁) နာရီ ၀န်းကျင်ပါ။) နောက်ပြီး ဧည့်သည်က နောက် destination တစ်ခုမှာပါ ထပ်လည်ဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် တစ်ရက်လျော့သွားလို့ အစီအစဉ်တွေ ပြောင်းသွားရမှာကို ဘယ်လိုတာဝန်ယူပေးမှာပါလဲ။ ဖြစ်လာမယ့် ပြဿနာတွေက အများကြီးပါ။ တကယ်တမ်း နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားပြီး ဖြေရှင်းရမှာက Travel Agent နဲ့ ဧည့်သည်ကိုယ်တိုင်ပါ။
နောက်ဆုံးတော့ ပြဿနာက ဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားသလဲဆိုရင် ငပလီမှာ 4* ဟိုတယ်မှာနေတဲ့ ဧည့်သည်က 2* ဟိုတယ်မှာနေဖို့ရော၊ (၃၅) ဒေါ်လာကိုရော လက်မခံတဲ့အတွက် နေနေတဲ့ ဟိုတယ်မှာပဲ တစ်ညထပ်နေဖို့ ကျွန်မတို့ဘက်က အခန်းခ စိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (ဟိုတယ်ကလည်း အခန်းရအောင် ရှာပေးပါတယ်။ အခန်းသာ အပြည့်ဆိုရင်လည်း မပြန်ဖြစ်တဲ့ညအတွက် အခန်းရှာဖို့ကိုလည်း ခေါင်းစားရပါဦးမယ်။) ရန်ကုန်ကဟိုတယ်မှာ တစ်ည cancel ကလည်း no show ဖြစ်တဲ့အတွက် 100% cancellation fees ပေးရလို့ အခန်းခ ပြန်မရပါဘူး။ ဧည့်သည် complain မတက်တာကိုပဲ တော်သေးတယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။
တကယ်တော့ လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုပဲလည်း အပြစ်မတင်ချင်ပါဘူး။ လေယာဉ်အပြောင်းအလဲဆိုရာမှာ မပြည့်စုံသေးတဲ့ လေဆိပ်တွေရဲ့ အခြေအနေတွေပေါ်လည်း မူတည်သလို ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မှာလည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ဖြစ်စေချင်တာက တာဝန်ယူမှုအပိုင်းပါ။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအပေါ်မှာ တာဝန်ယူပေးစေချင်ပါတယ်။ “ငါတုိ့ လေယာဉ် cancel ဖြစ်တာ ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်” ဆိုတာထက် အစစကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုအတွက် အခြားလေယာဉ်မှာ ပြောင်းပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခု တာဝန်ယူပေးစေချင်တာရယ်ပါ။
ကျွန်မတို့ဆီမှာသာ Tourism Law က သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိသေးတာပါ။ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာကတော့ ခရီးစဉ်တစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင် Law တွေ၊ Contract တွေနဲ့ တိတိကျကျ လက်မှတ်ထိုး၊ စာချုပ်ချုပ်ကြရတာပါ။ တစ်ခုခုဆိုရင်လည်း ပြန်လျော်ရမယ့် ပမာဏက မနည်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလို ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေက စိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့ ဧည့်သည်တွေအတွက် အခွင့်ကောင်းလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ ဒီမှာတော့ ဘာမှမပြောဘဲ ဖြစ်သမျှပြဿနာကို အသာငြိမ်နေကြ၊ ဟိုဘက်လည်းကျရော အသည်းအသန် complain တက်ပြီး refund တွေပြန်တောင်းလုပ်ကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ နာမည်ပျက်တာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်။ Flight Booking Status ရဲ့ အောက်မှာ စာလေးတစ်ကြောင်းကို အမြဲတမ်းထည့်ရေးပေးရပါတယ်။
“Domestic flight number & flight time may change and please verify it prior to departure!!!”
ဂိုက်ရှာရတာ အရမ်းကျပ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကဆို ကိုယ်ဈေးပေးလိုက်တဲ့ ဖိုင်တစ်ဖိုင် confirm ပြီဆိုရင် ပျော်နေရပေမယ့် အခုဆို ဂိုက်ရှာရမယ့်အရေး၊ ဟိုတယ်ရှာရမယ့်အရေးကိုတွေးပြီး စိတ်ညစ်မိနေတတ်ပါတယ်။ မေးလိုက်သမျှ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေအကုန်လုံး ရက်အပြည့်ပါတဲ့။ တစ်ချို့ဆို နောက် နှစ်လသုံးလလောက်အထိ လုံးဝမအားပါဘူးတဲ့။ ပြောရရင် English speaking guide (E-guide) နဲ့ other language guide ဆိုရင် E-guide က များတဲ့အတွက် ရှာရတာ လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုကျတော့ ဘယ်ဂိုက်ပဲမေးမေး ပြည့်နေတာတွေချည်းပါပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့မှာ proposal တစ်ခု ပေးတော့မယ်ဆိုရင် သူတို့လိုချင်တဲ့ဂိုက်နဲ့ ပေးလို့မရပါဘူး။ E-guide နဲ့ ဈေးအရင်တွက်ပြီး other guide ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ထပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ supplement နဲ့ ဈေးပေးရပါတယ်။ ဆိုတော့ ဈေးပေးရင်လည်း ပုံသေပေးလို့မရပါဘူး။ ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးအသစ်တွေကို ခဏခဏတွက်ပေးရပါတယ်။ ဒီတော့ ဧည့်သည်အနေနဲ့ ခရီးတစ်ခုသွားဖို့ ပိုက်ဆံကိုချိန်ဆတွက်ချက်ရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ (ကိုယ်တွေလည်း ဒီလိုတွက်နေကျဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။)
ဒီလို ဧည့်လမ်းညွှန်ရှားပါးလာတဲ့ ပြဿနာကို (တကယ်တော့ ဧည့်သည်များလာတဲ့အချိန်မှာ ဂိုက်အရေအတွက် မလုံလောက်တော့တာပါ) ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာ ကျွန်မကတော့ သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကလည်း မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။ အချိန်ရော၊ ငွေရောကို ရင်းနှီးရပါတယ်။ ဘာသာစကားတတ်ရုံနဲ့၊ ဂိုက်သင်တန်းဆင်းရုံနဲ့ ဂိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလို့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ ဗဟုသုတကလည်း ပြည့်စုံပါမှ၊ tour မလိုက်ရသေးခင်မှာလည်း ပုံမှန်လည်နေကျ toursite တွေကို study guide အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ်လိုက်ပြီး လေ့လာဦးပါမှ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကလည်း ကောင်းမွန်ပါမှ၊ ဧည့်သည်ကို ဂရုစိုက်ရတဲ့အပြင် ဟိုတယ်ကျပ်တဲ့ ဒီလိုရာသီတွေမှာ ကိုယ်နေဖို့အခန်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာရတဲ့ ဒုက္ခတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်နိုင်ပါမှ… တကယ်တော့ အများကြီးပါပဲ။ (ကျွန်မကတော့ အပင်ပန်းမခံနိုင်တာရယ်၊ အချိန်နဲ့ငွေ မရင်းနှီးနိုင်တာရယ်ကြောင့် ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးကို စွန့်လွှတ်ထားပါတယ်။ )
မတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတွေကို ကြုံလာရတဲ့အခါ ဧည့်သည်တွေက ဂိုက်တွေကို အရမ်းရစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဂိုက်တွေအနေနဲ့ကျတော့လည်း ကိုယ့်ပယောဂမဟုတ်တဲ့အရာတွေမှာ (တစ်ချို့နားမလည်တဲ့သူတွေကျတော့) အပြောင်းအလဲတွေကို အကြောင်းကြားလာတဲ့ ရုံးအပေါ်မှာပဲ စိတ်ပြန်ကွက်ကြပြန်ပါတယ်။ ဧည့်သည်က ဂိုက်ကို တဂျီဂျီ၊ ဂိုက်က ရုံးကို ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်နဲ့ တစ်နေ့တစ်နေ့ ရုံးရောက်ပြီဆိုရင် အလုပ်မလုပ်ရခင် အဲဒီပြဿနာတွေကို အရင်ရှင်းနေရပါတယ်။ အရင်က ဧည့်သည်ကို ကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂိုက်တွေတောင် အခုဆိုရင် နားရက်မရှိ tour တွေလိုက်ရတာကြောင့် ပင်ပန်းလို့လားတော့ မသိပါဘူး။ တော်ရုံအာရုံနောက်တာတွေကို သည်းမခံနိုင်ကြဘဲ ရုံးဘက်ကို ဦးတည်လာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
(ကျွန်မအနေနဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေကို အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို ပြောပြရုံသက်သက်ပါ။)
တကယ်တော့ ပြောစရာတွေက အများကြီးပါ။ အားလုံးကိုသာ ရေးရရင်တော့ ပြီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကတက်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာကိုပဲ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ်။
အခုလို ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာတဲ့ ဇန်န၀ါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီမှာ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကို လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကပ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုရက်ဆိုရင် ငြမ်းအပြည့်ဆင်ပြီးကာထားလို့ ဘုရားကိုမမြင်ရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ဂေါပကရုံးကို ဖုန်းဆက်ပြီး မေးခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်လောက်မှာ ရွှေသင်္ကန်းကပ်ပါမလဲဆိုတော့ ရက်အတိအကျမထွက်သေးပါဘူးတဲ့။ ဇန်နာဝါရီ (၂၁) ရက်နေ့မှာတော့ Union of Myanmar Travel Association က စာပို့လာပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီ (၂၁) ရက်နေ့ကနေ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၀) ရက်နေ့အထိ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားရွှေသင်္ကန်းကပ်ခြင်းနဲ့ အခြားပြုပြင်မှုများလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီရက်အတွင်းမှာ ဘုရားလုံးတော်ကို မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ (၂၁) ရက်နေ့စတင်မယ့် ကိစ္စကို (၂၁) ရက်နေ့မှ အကြောင်းကြားလာတဲ့အတွက် ကျိုက်ထီးရိုးသွားလည်မယ့် ဧည့်သည်တွေအတွက် ဘာမှလုပ်ပေးလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဆိုးသွားတာက (၁၉) ရက်နေ့က ရောက်လာတဲ့ ကျွန်မတို့ ဧည့်သည် (၁၆) ယောက်က (၂၉) ရက်နေ့ကို ကျိုက်ထီးရိုးကို သွားမှာပါ။ အဲဒီမှာတင် ဂိုက်က ဖုန်းဆက်လာပါတော့တယ်။ ဧည့်သည်တွေ စိတ်ဆိုးနေပါတယ်၊ ဘာလို့ ကြိုမပြောရတာလဲတဲ့။ မောမောနဲ့တက်သွားပြီးမှ ဘုရားကို မမြင်ရရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။ ဧည့်သည်ကို ရှင်းပြရတာ စဉ်းစားကြည့်ရင် ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ “ငါတို့လည်း အဲဒီနေ့ကမှ စသိတာပါ။ အဲဒီသတင်းကို ရရချင်း မင်းတို့ Agent ကို အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ ဂိုက်ကိုလည်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ ရန်ကုန်ကို ရောက်ပြီးမှ ဒါကိုသိတဲ့အတွက်၊ အားလုံးကလည်း အတည်တကျဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တာ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဘုရားကို မမြင်ရတာပဲ ရှိပြီး တစ်ခြားပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းတွေကို နင်တို့ ခံစားလို့ရပါတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးရဲ့ အရမ်းလှတဲ့နေ၀င်ချိန်မှာ နင်တို့ ပျော်ရွှင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”..ဘာညာနဲ့ ရှင်းပြရတာ မောလည်းမောပါတယ်။ ရှက်လည်း ရှက်ပါတယ်။ (ဒီကြားထဲ ဂိုက်က ဟောက်တာကိုလည်း ခံရပါသေးတယ်။)
ဒီတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် နာမည်ကောင်းရကာစ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ၊ The Lady ကြောင့် ကျော်ကြားလာတဲ့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ၊ မပျက်စီးသေးတဲ့ သဘာဝအလှတွေကြောင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံကို လာလည်ကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေကြားမှာ နာမည်ပျက်သွားမှာ အရမ်းကြောက်ပါတယ်။ Smokeless Industry လို့ခေါ်တဲ့၊ နိုင်ငံကိုပဲ အရင်းပြုပြီး အရင်းအနှီးနည်းနည်းနဲ့ ငွေတွေသဲ့ကနဲဝင်လာနိုင်တဲ့ ဒီခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်အောင်၊ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်လို့ “ဟင်” ဆိုပြီး ဖြစ်မသွားအောင် အဘက်ဘက်က စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ လုပ်စေချင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက ရှိခဲ့တာတွေကို လက်စားချေနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်နိုင်ငံပဲ နာမည်ပျက်မှာပါ။ ဈေးကြီးလို့၊ လုပ်ရကိုင်ရတာ အရမ်းခက်လို့၊ ဟိုတယ် booking တွေ မရလို့..စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ဧည့်သည်တွေက တစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုကို ရွေးသွားတယ်ဆိုတာမျိုး ကြားလိုက်ရရင် အရမ်းနှမြောမိပါတယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရင် ဒီခရီးသွားလုပ်ငန်းကို လုပ်ရတာ ကျွန်မ တကယ်ကို ၀ါသနာပါပါတယ်။ ပျော်ချင်လို့ အားလပ်ရက်မှာ ခရီးထွက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို သူတို့ခရီးအတွင်းမှာ စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတာ၊ အလုပ်တွေနဲ့ဝေးရာကို ခဏလာတဲ့အချိန်မှာ ပျော်စရာအခိုက်အတန့်လေး ရသွားအောင် လုပ်ပေးရတာ ကုသိုလ်လည်းရ၊ ၀မ်းလည်းဝပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေအများကြီး ရနိုင်တဲ့ ဒီခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ အဓိကကျတဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ အလျင်အမြန်ပြည့်စုံပါစေ၊ Tourism Law လည်း အမြန်ဆုံး ရေးဆွဲနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။
(ဘာကွန်မန့်မှ မပြန်ဖြစ်ဘဲ ရေးချင်တာတွေ ရေးလိုက်ရတာ မောသွားပြီ။ ကွန်မန့်တွေ ပြန်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်လို့… နောက်ပြီး မွန်မွန်က ဒီ Tourism Field ထဲကိုရောက်တာ (၃) နှစ်ကျော်လောက်ပဲ ရှိသေးပါတယ်..အခုရေးထားတာတွေကလည်း အရမ်းသိလွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူး..မြင်နေ၊ ကြုံတွေ့နေရတာကို လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အတွေ့အကြုံနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ရေးထားတာပါ… ဒါကြောင့် မွန်မွန့်ထက် ပိုနားလည်တဲ့သူတွေ.. တစ်ခြား related industry က သူတွေရဲ့ ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့..)
အလုပ်လက်တွေ့လုပ်နေရတဲ့လူတော့ မသိဘူးကွယ် ကျုပ်တော့ဖြင့် စာကိုဖတ်လိုက်ရတာ
ဘီယာမသောက်ဘဲမူးနောက်သွားတာပဲ။ ကောင်းတယ်ဗျို့။ တစ်ညနေကို တစ်ပုဒ် တစ်ပုဒ်
တင်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျုပ်ဒီပို့စ်ကိုဝင်ဖတ်တာနဲ့ ဘီယာသောက်ဖို့မလိုဒေါ့ဘူး။
Tourism Law လည်း အမြန်ဆုံး ရေးဆွဲနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။
လက်တလောအနေအထားအရ ဂိုက်ထုတ်တဲ့လူတွေ ၀င်ငွေကောင်းနေ အဆင်ပြေနေတဲ့
သဘောပေါ့ Tourism Law ဆွဲတဲ့အခါကြရင် Tourism လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး
၀င်ငွေကောင်းတဲ့နေရာတွေ အဓီကကျတဲ့နေရာတွေမှာ စစ်တပ်က ၂၅% များယူအုံး
(ဟုက်လားဒေါ့တိဝူး ကျုပ်ရေးချင်တာကို လျှောက်ရေးထားခဲ့တာ)
တူမူးအောင်ဘဲ..နာဂ အမူးခံပီး ရေးရဦးမယ်ပေါ့..
ဟို 25% တော့ အနော်လည်းမလျှောက်တတ်ဝူး… ဘယ်သူတွေဆွဲနေကြသလဲတောင် မသိဝူး…
တစ်ကယ်တော့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းက အားလုံးစုပေါင်း လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကောင်းရုံ နဲ့ မရပါဘူး ။ ၀န်ကြီးဌာန ဆိုလည်း ဌာန ပေါင်းစုံ ကနေ ၀ိုင်းဝန်း အားဖြည့် ပေးမှ အကောင်းမွန်ဆုံး ရရှိနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းကြီးပါ ဆိုတော့ စုပေါင်းညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာ ဆိုတဲ စာထဲဘဲ ရှိပြီး သုံးယောက်ရှိရင် နှစ်ဂိုဏ်းကွဲလေ့ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တော်တော့် ကို လုပ်ရဦးမှာပါ ..
အခုလောလောဆယ် မှာတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ သိပ်ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှု မရှိသေးလို့ သဘောမနောကောင်းနေကြသေးတဲ့ အတွက် လာတဲ့ သူတွေ ကကျေနပ်နေကြတာပါ ။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ အပါးဝ လာပြီဆိုရင်တော့ .. အင်း အဲ့ဒီ့ အချိန်ကျရင်လည်း ပြောင်းလဲ ကောင်းလောက်ပြီလို့ မျှော်လင့် မိပါရဲ့ … :hee:
လေးလေးထူးဆန်းရေ.. သီးခြားကွန်မန့်တွေ မပြန်ဖြစ်ခဲ့တာ တောင်းပန်ပါတယ်..ပြောချင်တာတွေကို ပို့စ်ထဲမှာပဲ ထည့်ပြောသွားဖြစ်လို့ပါ..
ဟုတ်ပါတယ်.. လေးလေးပြောသလို ၀န်ကြီးဌာနပေါင်းစုံက ၀ိုင်းဝန်းအားဖြည့်ပေးရမှာပါ… ပြည်ထဲရေးတို့ဘာတို့ပေါ့…
အခုတော့ မွန်မွန်လည်း back office ကနေ service ပေးနေရတာတောင် တော်တော်လေး စိတ်ပျက်နေပြီ… ဒီတစ်ခါအလုပ်ထွက်ရင် Tourism ကပါ အထွက်ပဲ… ဘူအလုပ်ခန့်မဲဟင်င်င်…
သုံးပုဒ်လုံးတော့ ဖတ်ကြည့်ပြီးပြီ ခင်ဗျ။ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ အတွေ့အကြုံအစုံလင်ရတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ပြဿနာ အများစုက IT ကို ကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်သေးလို့ထင်ပါတယ်။
ဒီဘက် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ခရီးထွက်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်ဘဲ ဘွတ်ကင်လုပ်သေချာ plan လုပ်သွားရင် ဘာ agent မှ မလိုဘဲ အဆင်ဆင်ပြေပြေဖြစ်တာများပါတယ်။
IT ကလည်း တော်တော်အရေးပါပါတယ်.. visa ပိုင်းတို့ ဘာတို့မှာ အွန်လိုင်းနဲ့သေချာလုပ်လို့ရရင် တော်တော်အဆင်ပြေမှာပါ… မွန်မွန်တို့ဆီမှာလည်း agent ကမဟုတ်ဘဲ ရုံးက တင်ထားတဲ့ website ကတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေလည်း အများကြီးပါပဲ…
အဲ့ဒီ နိုင်ငံခြားသားက မတတ်သာလို့သာ ခံရတယ်..
မသွားနဲ့ သိလား မစွံဝူး လက်တို့သေးတာ…
ဒီဘက်ခေတ် ဘလော့တွေ အက်စ်အင်န်အက်စ်တွေ ခေတ်စားတော့
လမ်းညွှန်စာအုပ်သာ ဘာသာစုံနဲ့ မရှိရင်နေမယ်..
ဆဲစာလေးတွေများ …မွ လို့ …ခိခိ…
ဟုတ်ပါတယ်… service ကောင်းရင်လည်း ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ထောက်ခံချက်ပေးကြသလို. မကောင်းရင်လည်း မကောင်းဘူးဆိုပြီး လက်တို့ကြပါတယ်… ဆိုတော့ ဒီလိုအခြေအနေကြားထဲမှာ complain မထိအောင် စီစဉ်ပေးရတာ တော်တော်လေးကို စိတ်ပင်ပန်းပါတယ်..
မွန်မွန်ရေ ကျမ သူငယ်ချင်းနဲ့ တိုးအေဂျင်စီတခု ပြသာနာ တက်ဖူးတယ် သိပ်မကြာခင်က ပေါ့
သူက အပြင်ဖက်သွားလည်တာပေါ့ အေဂျင်စီဘက်က package စီစဉ်ပြီး ဂိုက်တယောက်ထည့်ပေးတယ်ဟိုဘက်ရောက်တော့ ဟိုဘက် ဂိုက်နဲ့ ဆုံပြီး နှစ်ယောက် ပေါ့
သူတို့ ဂရုထဲက ကလေးတယောက် ကုန်တိုက်မှာ ပျောက်ကျန်နေခဲ့တာ ကို သူက ကားပေါ်မှာ အအေး သောက်မပျက်ပါတဲ့ ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်ရှင်းဆိုတဲ့ ပုံစံပေါ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သွားရှာခဲ့ရတယ်ပြောတယ် ပြောတော့ သူက ဂိုက် ဘ၀မှာ ကျင်လည်နေတာ ၁၂ နီးပါး ရှိပြီ ဆိုပဲ
ကျန်သေးတယ် ကိုယ်တွေ့တွေ ပြောမကောင်းလို့ စိတ်ပေါက်တဲ့နေ့တော့ ပြောပြအုန်းမယ် ကောင်းတာလေးတွေလည်း ရှိ ဆိုးတာလေးတွေလည်း ရှိပေါ့ အဓိကကတော့ ပြည်တွင်းကလူတွေ ကို သိပ်အလေးမထားတာမျိုးတွေပါ
ပြည်ပကလူဆိုရင်တော့ ဆက်ဆံရေးက တမျိုး
အယ် ၂ ခု ထပ်သွားတယ်
ဟိုဘက်ပို့စ်တွေမှာ ကွန်မန့်မပြန်ဖြစ်တာ တောင်းပန်ပါတယ်နော်.. ရွာထဲကိုလာလည်း ခဏပဲ ပတ်နိုင်လို့ပါ…
တကယ်တော့ ဒီ industry က service industry ဖြစ်တဲ့အတွက် service ပေးရတဲ့ လူတွေပေါ်မှာ အဓိက မူတည်ပါတယ်… သူတို့ကိုလည်း ပျာပျာသလဲ ဂရုစိုက်ပေးနေစရာမလိုသလို မျက်နှာလွှဲခဲပစ် တာဝန်မဲ့ဖို့လည်း မသင့်ပါဘူး။ ဂိုက်ဆိုတာ ဧည့်သည်အချင်းချင်းသာ သတိလွတ်ရင်လွတ်မယ်.. သူကိုယ်တိုင်ကတော့ လူစုံလားမစုံလားဆိုတာကို အချိန်ပြည့် စစ်နေရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်… ဒီမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ဂိုက်တွေကို သဘောကျကြပါတယ်.. တစ်ခုပါပဲ .. တစ်ခါတစ်လေ ဂိုက်တွေက ဧည့်သည်ဘက်ကနေကြည့်ပေးကြတော့ ရုံးဘက်ကို နားမလည်ပေးကြတာပါ.. စာရွက်ပေါ်မှာ ခရီးသွားနေတဲ့ agent က ၀န်ထမ်းနဲ့ လက်တွေ့ခရီးသွားနေတဲ့ သူတို့တွေနဲ့ ခရီးအတွေ့အကြုံ ကွာကောင်းကွာနိုင်ပေမယ့် ဒီ package တစ်ခုလုံးပြီးတဲ့အထိ အစအဆုံးလုပ်ထားရတဲ့ ရုံးဘက်က အခြေအနေတွေကိုတော့ နည်းနည်းလောက် မေးသင့်တယ် ထင်တာပေါ့နော်…
အစ်မကိုယ်တွေ့လေးတွေလည်းပြောပြပါဦး.. ဗဟုသုတရအောင်လို့ပါ… မှတ်လည်းမှတ်ထားရတာပေါ..
လုံမလေး ရေ အခုမှ တွေ့လို့ သုံးပုဒ်လုံး ပြန်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်
ရေးထားတာ ရှင်းသလို ကိုယ်တွေ့တွေ မို့ ဖတ်လို့ တကယ်ကောင်းပါတယ်
နောက်လဲ များများရေးပါဦး ရေးစရာ အတွေ့အကြုံတွေက အများကြီး ရှိနေမှာပါ
အချိန်တွေ ကြာလာရင် တော့ အခက်အခဲတွေလဲ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနိုင်လို့ လျော့လာမယ် ထင်ပါတယ်
လုံမလည်း အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်မိတာပါပဲရှင်…
တစ်ခါတုန်းက ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ရွှေသင်္ဃန်းကပ်ချိန်မှာ
ဘုရားကျောက်လုံးတော်တစ်ပါတ် ငြမ်းအတွင်းကနေ ဖူးမျှော်ခွင့်ရခဲ့ပြီး
လုံမလေးရဲ့ ဧည့်သည်တွေလဲ အမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီး အနီးကပ်ဖူးခဲ့ရရင်ကျေနပ်ကြမှာပါ…
ဟုတ်.. အဓိကကတော့ ကြိုသိထားပြီး ကြိုအကြောင်းကြားထားရရင် တော်သေးတာပေါ့နော်.. ရောက်ပြီးမှ သိရတော့ စိတ်ဆိုးကြတာပေါ့.. မောမောနဲ့တက်သွားပြီးမှ ဘုရားမမြင်ရတော့ ဘာဖြစ်တယ်လေး ညာဖြစ်တယ်လေးနဲ့ ပြဿနာရှာကြတာ… အန်တီအိပြောသလို ယောက်ျားလေးတွေက အနီးကပ်ဖူးလို့ရရင်တော့ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမှာပါပဲ..
တော်တော်လေး စိတ်ကျေနပ်မှု ဖြစ်စေတာတဲ့ စကားလေးကတော့
မွန်လေးက ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုတာပါပဲကွယ်
ကျန်တာတွေတော့ ၊ ကိုယ်နဲ့ ဝေးတဲ့နယ်ပယ်မို့ လို့၊ ထူးထွေ ငန်စရာမရှိပါဘူးကွယ်
မလုပ်ပါဘူး ကိုပေရယ်.. တော်တော်လေး ပင်ပန်းပါတယ်.. ပိုက်ပိုက်တော့ ရတာပေါ့နော်.. ဒါမယ့် ပိုက်ပိုက်ထက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုသနားမိလို့..
Travel and Tour ကတော့ အခုချိန် အလုပ်ရှုပ်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်မှာပါပဲ။
မကြာခင် အသားကျသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မနှစ်က ဧည့်သည်တွေလာတာ ၄ ရက်ကို ဟိုတယ် ၂နေရာပြောင်းနေပေးခဲ့ရတယ်။
ဒို့တိုင်းပြည်လည်း အပေါ်က တစ်ယောက် ခေါင်းညိမ့်မှဆိုတဲ့ ကြိုးနီစနစ်က မြန်မြန်ထွက် နီုင်မှ အလုပ်တွေ အဆင်ပြေမှာပါပဲ။
hotel zone တွေ မြန်မြန်ဆောက်ပြီးပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရမှာပဲ အန်တီရေ…
ဒါမှမဟုတ် home stay တွေ ပေးရင်လည်း မြန်မြန်ပေးပါတော့ပေါ့… အိုဘယ့် permission!!!
အခု လက်ရှိမှာ မပြေမလည်ကိစ္စတွေကို နမူနာယူပြီး
နောက်ထပ် မဖြစ်အောင် လုပ်သင့်ပါတယ်
tourism ဆိုတာ နိုင်ငံအတွက် အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဏမှာ ရှိနေပါတယ်
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ သိပ် မပျက်စီးသေးတဲ့ (အထင် ပြောတာနော်) ဒီနိုင်ငံမှာ
စိတ်ဝင်တစား လေ့လာလည်ပတ်စရာတွေ အများအပျား ရှိနေပါတယ်
သေချာ ဖော်ထုတ်သင့်တဲ့ နေရာတွေလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ
အဲဒီ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဘက်ကို သေချာ အလေးထားသင့်ပါသဗျ
အလုပ်ကလဲ ထွက်ပါနဲ့ဦး လို့
သေချာ လေ့လာပြီး ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ထပ်ထောင်ကြရအောင်လေ
ကျုပ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းဘဲ …
ဒီအကြောင်းတွေ မသိလေတော့ကာ …
ဟိုဖတ်ဒီဖတ်တော့ လျောက်ဖတ်သွားဒါဘဲ …
ဘာမှတော့ ပြန်ပြောတတ်ဘူးရယ် …
ဒါဂိုတော့ ခွေးလွှတ်ဘာကွယ် ….
မန့်ချင်လွန်းလို့ …. မန့်လိုက်ဒါဘာလို့ …
ဒီခေတ်ကြီးမှာ ကုမ္ပဏီ ထောင်ရအောင် .. ဘာညာနဲ့ ..
လူလိမ်ဒွေ ပေါနေဒယ် …
သဂျား ဆိုဒဲ့ လူဂဒေါ့ အဆိုးဆုံးဘဲ …
ဒီတော့ သတိကြီးကြီး ထားပါ … ငွင်းး ငွင်းးး
ကုမ္ပဏီ ထောင်ဖြစ်ရင် အန်စာတုံးကို ညစောင့်ခန့်ဖို့ စဉ်းစားထားတယ်
သိကြားက ရှယ်ယာရှင် ငှက္ကဌ လုပ်မယ်
ဟမငေးး ပျော်လိုက်ဒါ …
ညစောင့် လုပ်မယ် .. လုပ်မယ် …
ပီးရင် အကုန် သမပြီး ရောင်းစားပစ်မယ် …
ငှက္ကဌ ဆိုသူကို သတ်မယ် …
ပီးရင် … နိုင်ဂံခြား ထွက်တွားမယ် …
မန်းလေးဂျင်း လေးကို အဖော်အဖြစ် ခေါ်သွားမယ် …
တောက်စ် … အကျံပိုင်သကွာ ….
သမတာတွေ မိလို့ မန်နေးဂျင်းက တရားစွဲ (business law ကို ထုံးလိုချေ ရေလိုနှောက်ထားတာနော်)
ငှက္ကဌ က အမည်ပျက်စာရင်း ကြေညာ
အေးအေးဆေးဆေး အစိုးရရဲ့ ဧည့်သည်တော် ဖြစ်သွားမှာပေါ့
နာ့ဒို့ကို မွန်မွန် ကတော့ ဆဲဒေါ့မှာဘဲ .. အဟီးးး
မဆဲခင် တော်ဂျရအောင် ….
ဖဘ မှာဘဲ ရန်ဖြစ်ဒေါ့မယ် .. ဒါဗျဲ …
အွန်း.. အဆဲခံရမှာတော့ သိသားပဲ… တော်သေးတာပေါ့ သိကြလို့.. နို့မို့ဆို နာ့ပို့စ်ကိုလာပီး ရန်ဖစ်နေဒါ.. ဒဂယ်ဆဲမှာ..
ဆက်ပြော မောင့်အံ့ကို အဟိ
ဂဇက် ဇန်နဝါရီလ အကောင်းဆုံး ဆုရ မွန်မွန့်ကို ဦးကြောင် အပိုဆုချမယ်… လာထား အာဗွားစ် :harr:
ပြောပြလိုက်ပါဦး… လုံမရယ်… နင်တို့ ငါတို့တွေ ခုနှစ် ဘယ်လောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ် promote လုပ်နေရသလဲလို့… နောက်ကျမှ ဖတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်…
ငါ နင့်ရဲ့ ဂဇက်ဖတ်ပြီး ပြုံးစိစိဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာကို သတိရတယ်…